Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibada Itoobiya oo la dilay - Idman news
Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibada Itoobiya oo la dilay
Mohamoud 1 week ago 1 min read
Ciidamada Difaaca Qaranka Itoobiya ayaa galabnimadii Arbacada shaaciyay geerida Wasiirkii hore ee arimaha dibada Itoobiya, Seyoum Mesfin intii uu socday dagaal ka dhacay waqooyiga gobolka Tigray ee dalkaasi.
Brigadier General Tesfaye Ayalew, oo ah madaxa waaxda howl galka ee ENDF ayaa sheegay in Seyoum Mesfin lala dilay Asmelash Woldeselassie, oo horay u ahaan jiray baarlamaankii Ethiopia iyo Abay Tsehaye, Wasiirkii hore ee arimaha federaalka itoobiya intii uu socday dagaalkii arbacadii.
Ayalew wuxuu sheegay in shan saraakiil kale oo kale oo rayid ah iyo saraakiil ciidan lagu qabtay howlgalka militariga, sida ay ku warantay wakaalada wararka dowladda ee Itoobiya.
Dowladda federaalka ee Itoobiya ayaa tan iyo 4tii Nofeembar waxay waday hawlgallo milateri oo ay ka waday gobolka Waqooyiga ugu badan ee gobolka Tigreega ee lagaga soo horjeeday Jabhadda Xoreynta Dadka ee Tigreega (TPLF), oo horay u maamuli jirtay gobolka, kaddib markii sida muuqata ay kooxda TPLF weerartay Taliska Woqooyi ee ENDF.
Previous articleCongress-ka Mareykanka oo u codeeyey xilka lagaqaado Trump +SAWIRRO
Previous Congress-ka Mareykanka oo u codeeyey xilka lagaqaado Trump +SAWIRRO
Next Aqalka Wakiilada dalka Mareykanka oo u codeeyey xil-ka-qaadista TRUMP
Yaa sheegtay mas’uuliyadda qaraxyada lagu hoobtay ee ka dhacay Baqdaad?
Madaxda Dowlad goboleedyada oo shir fogaan arag ah yeeshay
Al-Shabaab oo soo buux dhaafiyey deegaano ka tirsan Shabeellada Dhexe
Muxuu ka yiri Jurgen Klopp guuldarradii kooxdiisa Liverpool ay kala kulantay Burnley?? – Gool FM
Warbixin: Suxufi heybadiisa shaqo ku laray u gar gaarida kuwa danta yar.
Muxuu ka yiri Jurgen Klopp guuldarradii kooxdiisa Liverpool ay kala kulantay Burnley?? – Gool FM January 22, 2021
Yaa sheegtay mas’uuliyadda qaraxyada lagu hoobtay ee ka dhacay Baqdaad? January 22, 2021
Madaxda Dowlad goboleedyada oo shir fogaan arag ah yeeshay January 22, 2021
Warbixin: Suxufi heybadiisa shaqo ku laray u gar gaarida kuwa danta yar. January 22, 2021
Al-Shabaab oo soo buux dhaafiyey deegaano ka tirsan Shabeellada Dhexe January 22, 2021
Total visitors : 18,181